Safiirki Djibouti ee Magaalada Xamar oo Sagootin loo sameeyey – Xeernews24
Safiirki Djibouti ee Magaalada Xamar oo Sagootin loo sameeyey
14. August 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta Xarunta Madaxtooyada qado sharaf sagootin ah ugu sameeyay Danjiraha Jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya Soomaaliya Mudane Dayib Dubbad Rooble oo waqtigiisu uu dhammaaday.
Madaxweynaha ayaa ku ammaanay Danjire Rooble waxqabadkiisa iyo dadaalka uu u galay taageerada Soomaaliya mudadii uu ahaa Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya.
“Xidhiidhka Soomaaliya iyo Djibouti oo weligiiba ahaa mid aad u wanaagsan, ayaa gaadhay heerkiisii ugu sarreeyay muddadii 7-da sanno ahayd ee Danjire Dayib uu ku sugnaa Soomaaliya. Waxaa uu dalkan ka shaqeynayey xilli aad u adag, ilaa iyo haatanna waxaa uu si dhow ula shaqeeyaa Soomaaliya oo dhan. Waxaan u mahad celinayaa Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka reer Djibouti oo gartey inay inoo sooo xulaan shakhsi daacad ah oo dadaal badan oo Soomaaliya wax weyn u qabtey”, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabadaasi haddiyad ku guddoonsiiyey Danjire Dayib Dubbad Rooble, isagoo u rajeeyay inuu Ilaahay u fududeeyo xilka cusub ee uu safiirka kaga noqonaya dalka Qatar.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya, Dr Cabdisalaan Hadliye Cumar iyo Wakiilka Jaamacadda Carabta u fadhiya Soomaaliya, Mohamed Abdalla Idris, oo iyaguna goobta ka hadley ayaa si kooban uga hadley dadaalka iyo shaqada wanaagsan ee Danjire Dayib Dubbad Rooble uu ka qabtey Soomaaliya.
Danjire Dayib Dubbad Rooble oo xafladda qadada ah ka hadley ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu noqdo isku xiraha labada dal ee walaalaha ah muddadii 7-da sanno ahayd ee la soo dhaafay, isagoo sheegay inuu sii wadi doono dadaalka iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed.
Munaasabaddan waxaa sidoo kale ka soo qeybgaley Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha, ahna Wasiirka Cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac, xubno ka tirsan labada gole, Taliyaha Ciidammada AMISOM, General Cusmaan Subagle, danjireyaasha waddamada shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Dowladda Jabuuti oo ay Ciidamo ka joogaan Soomaaliya ayaa dhowaan lagu wadaa inay Safiir cusub u soo magacawday Soomaaliya, marka uu Danjire Dayib Dubbad Rooble uu dalkiisa dib ugu laabto.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/08/safiir-Dubad.jpg 432 648 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-08-14 12:20:002016-08-14 12:20:05Safiirki Djibouti ee Magaalada Xamar oo Sagootin loo sameeyey
Rayaale Xaamuud oo Riyaddi Aabihii Hammi bbeel kale ku badashay Biyo Xidheenkii Abay ee Ethiopia ku Faani Jirtay oo Derbiyadda jabsaday